China Chinyorwa Spice Munyu Pepper Mill Neakasiyana emwaka vagadziri uye vanotengesa | Trimill
Chero bedzi iri zvidimbu zvidiki, unogona kuikuya paunoda. Cumin, mhodzi mhodzi, chiKorea chakakora gungwa munyu, pepper yemusango yeTaiwan zvichingodaro. Asi usaise ese sesame mhodzi mukati kukuya. Mbeu dzakadai dzine mafuta ane granular dziri nyore kuumbiridza mushure mekukuya uye kuvhara chiteshi chekubuda. Saka inofanirwa kuverengerwa uye kushandiswa.
Kazhinji, bhodhoro remuviri wemunyu mhiripiri chigayo chakagadzirwa chemhando yepamusoro acrylic, uye zvimwe zvinhu zvakaita seakakosheswa bamboo anoshandiswa. Idzo idzi dzinowanzo simbi isina simbi kana zvedongo mashizha.
Tenga peppercorn nhema nhema kana chena, uzviise mune zvinonhuwira zvinokanganisa chigayo, shandura mubato kana kapu yebhodhoro kuti uwane hupfu hwakatsva hwemwaka wekurunga. Izvo zviri nyore kushandisa, uye kazhinji kune mabhodhoro emwaka, ayo anogona kushandiswa kubata hupfu hwepasi.
Kune mhando zhinji dze mhiripiri, dema mhiripiri, chena mhiripiri, green mhiripiri, uye tsvuku mhiripiri zvinowanzo shandiswa.
Pepper nhema inogadzirwa kubva kumabriji asina kusimba pamiti yemizambiringa. Chekutanga chimboibikira kwechinguva mumvura inopisa kuti usuke pamusoro uye nekuomesa. Munguva yekuita uku, nekuda kwekuita kwefungus, iyo peel inoputira mbeu inozosviba zvishoma nezvishoma uye inopera, uye pakupedzisira yozoita mutete, kuunyana. Mushure mekuomesa maitiro, chigadzirwa chakawanikwa nhema mhodzi mhiripiri.
Mhiripiri chena inogadzirwa nembeu peel yabviswa. Mhiripiri chena inowanzo gadzirwa nemabriji akaibva zvakakwana, akanyoroveswa mumvura kweinenge vhiki, kukwizwa kubvisa zvakasara zvepurp, ndokuzoomesa mhodzi dzisina chinhu kuti dzive mhiripiri chena.
Pepuru chena inowanzo shandiswa semwaka wemicheka yakajeka uye zvimwe zvekudya muUnited States nedzimwe nyika, nekuti mhiripiri nhema inozivikanwa nyore muzvikafu zvine ruvara. Inoita gakava kuti mhiripiri nhema kana chena mhiripiri zvinonyanyisa. Nekuti zvimwe zvinhu zveganda rekunze hazvigone kuwanikwa mumbeu, hwema hwemhiripiri hahuna kufanana.
Pepuru yakasvibirira, sepepuru nhema, inogadzirwa kubva kumabriji asina kukura. Iyo yakaomeswa mhiripiri mhiripiri inochengetedza ruvara rwayo rwegirini kune imwe nhanho nekuti yakagadziriswa nemaitiro akadai sesarufa dioxide kana kuomeswa nechando. Mbeu dzemhiripiri dzakasvinwa mu brine kana vhiniga dzinozoonekwa zvakare kunge dzakasvibira. Mutsva uye isina kugadziriswa pepper ma berries haawanzo kuwanikwa muWest. Ivo vanonyanya kuwanikwa mune mamwe madhishi eAsia, kunyanya Thai ndiro. Kunhuhwirira kwemutsva wepepuru michero inotapira uye kutsva, ine hwema hwakasimba. Pepper isina kuiswa kana yakasanganiswa inoora nekukurumidza.
Kunhonga michero mitsvuku yemhiripiri mutsvuku mu brine nevhiniga kunogona kugadzira mhiripiri tsvuku isingawanzoitika; iyo tekinoroji yekuchengetedza tekinoroji yeyakaomeswa mhiripiri yakasvibira inogona zvakare kushandiswa kuomesa yakawanda isingawanzo kuibva tsvuku mhiripiri mbeu.
Pashure: Classic bhatiri yemagetsi munyu uye mhiripiri chigayo ESP-1
Zvadaro: Kukosha Kwemunyu Uye Mhiripiri mukuyi
Kukuya Pepper Nemunyu
Mill Munyu Uye Pepper
Munyu Uye Pepper Grinder
Munyu Uye Pepper Grinder Set
Munyu Uye Pepper Grinder Set Magetsi
Factory Zvakananga 100ml Disposable Manual Munyu A ...